चीनमा महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌लाई किन खुवाइरहेछन् नपुंसक बनाउने औषधी
01 अमेरिकाद्धारा नेपाललाई ३६ करोड बराबारको स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान
02 सहकारीको अत्यावश्यक काम मात्र गर्न विभागको अपिल
03 कलंकी र बसपार्कबाट यात्रुहरुसँग बढि भाडा लिने २ जना पक्राउ
04 वादलले पाए सूर्य चुनाव चिन्ह, खिमलाललाई कलम
05 कृषि विकास बैंकको एग्रिकल्चर बोण्ड ऋणपत्र जारी
06 कोरोनाबाट थप १६८ जनाको मृत्यु, ९,३०५ जनामा संक्रमण
07 आज नेप्से कारोबार उकालो
08 सेती अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा थप २७३ जनामा कोरोना पुस्टि
09 विकास निर्माणका कामलाई रोकेन निषेधाज्ञाले : विपन्न वर्गलाई राहत
एजेन्सी काठमाडौं : चीनमा श्रीमान्को&zwnj; धोकाबाट बच्नका लागि महिलाले नयाँ तरिकाको खोजी गरेका छन् । यस्तो तरिका जसबारे थाहा पाउँदा हरेक व्यक्ति जिल खान्छन् । पार्टनरले आफूलाई धोका नदिउन् र अन्य महिलासँग नसल्किउन् भनेर महिलाले आफ्ना श्रीमान्७शधलवसलाई औषधी खुवाइरहेका छन् । यो कुनै साधारण औषधी होइन, पुरुषलाई नपुंसक बनाउने औषधी हो ।
ग्लोबल टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार चीनमा श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्ला&zwnj;ई गोप्य तरिकाले यस्तो औषधी खुवाइरहेका छन् जसका कारण उनीहरु नपुंसकताको शिकार हुने गर्छन् ।
ग्लोबल टाइम्सका अनुसार एक लेखमार्फत् केही चिनियाँ श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्ला&zwnj;ई गोप्य तरिकाले डायगाइलस्टीलबेस्ट्रोल खुवाइरहेको पत्ता लागेको छ । जानकारीमा उल्लेख भए अनुसार यो औषधी एक प्रकारको सिन्थेटिक एस्ट्रोजन हो जसले पुरुषलाई इरेक्सनबाट रोक्ने गर्छ । चीनमा हालै यस्ता किस्सा कहानी सोसल मिडियामा निकै भायरल भएका छन् ।
विच्याटमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार केही महिलाले अनलाइनमार्फत् औषधी अर्डर गरेको र गोप्य तरिकाले खानामा वा पेय पदार्थमा मिसाएर आफ्ना श्रीमान्७शधलवसलाई दिने गरेका छन् । यो औषधी खाएपछि केही धोकेबाज श्रीमान्स&zwnj;ले आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिन बन्द गरेको पनि बताइन्छ । लेखमा केही महिलाको प्रतिक्रिया पनि लिइएको छ । यसमा एक महिलाले औषधीलाई प्रभावकारी बताएक छिन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो औषधीलाई कार्सिनोजनको रुपमा पहिचान गरेको छ ।
एक महिलाले भनिन्, ‘यो औषधी मैले खुवाउन सुरु गरेको दुई हप्तापछि नै असर देखिन सुरु भयो । ’ महिलाले अब उनका श्रीमान् घरमा नै बस्ने र राम्रो व्यवहार गर्ने जानकारी दिइन् । यद्यपि, यो लेख सोसल मिडियामा भाइरल भएपछि अनलाइन प्लेटफर्मबाट यो औषधी गायब भयो । पत्रकारले लोकप्रिय अनलाइन प्लेटफर्ममा औषधी निकै खोजे तर पाउन नसकेको बताए ।
नियाक्सिआंग मर्निङ हेराल्डका अनुसार केही स्थानमा अहिले पनि गोप्य रुपमा सेतो पाउडरको रुपमा यो औषधी बेचिँदै छ जुन गन्धहीन छ र तुरुन्त पानीमा घोलिने गर्छ । एक पसलेले एक महिनाभित्र सयभन्दा बढी ग्राहकलाई यो औषधी बेचेको दाबी गरे । पसलमा काम गर्नेहरुका अनुसार औषधीले सामान्य रुपमा १५ दिनमा आफ्नो असर देखाउन सुरु गर्छ । राहतको कुरा के हो भने यो औषधीको सेवन गर्न बन्द गरेको २१ दिनमा इरेक्सनको क्षमता २१ दिनमा फिर्ता हुन्छ ।
नक्कली परेला लगाउँदा यी युवतीको गुम्यो आँखाको ज्योति !
संसारकै अनौठो सडक : ५ तले घरको छत गाँसिएर बनेको छ सडक ?
नागरिक एपमा थप नयाँ ८० सेवा थप्ने तयारी